Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Ọrụ Ndị Nwanyị -> Chọọchị
Chọọchị: [Ọrụ Ndị Nwanyị]
Ọ dịkwaghị ihe dị iche ugbu a. Nkewa ọ bụla adịkwaghị. A naghị ahụkwa anyị dị ka ndị Juu, ma ọ bụ ndị Griik, ma ọ bụ ndị ohu, ma ọ bụ ndị nwere onwe ha, ma ọ bụkwanụ ndị nwoke ma ọ bụ ndị nwanyị, kama anyị nile bụ ndị nke Kraịst, ndị e jikọtara nꞌotu nꞌime Kraịst Jisọs.
1 KỌRINT 11:3
Ma ọ dị otu ihe dị mkpa m chọrọ ichetara unu. Achọrọ m ka unu mata na dị ka Kraịst si bụrụ isi nwoke nile, otu a ka nwoke ọ bụla si bụrụ isi nwụnye ya. Chineke bụkwa isi Kraịst.
 Mgbe ihe ndị a gasịrị, Jisọs gara nꞌobodo ukwu nile na nꞌobodo nta nile na-ekwusa ozi ọma alaeze Chineke. Ndị ozi ya iri na abụọ ahụ sokwa ya. Ụmụ nwanyị ụfọdụ ndị a Jisọs gwọrọ ọrịa na-enye ha nsogbu, onye dị ka Meri Magdalin onye o sitere nꞌime ya chụpụ mmụọ ọjọọ asaa, na Joana nwụnye nwoke a na-akpọ Chuza onye na-elekọta obi eze Herọd na akụ ya nile, na Suzana, na ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ọzọ so Jisọs na-egboro ya mkpa ya.
 Unu bụ ndị nwanyị a na-alụ alụ, doonụ onwe unu nꞌokpuru di unu dị ka unu si doo onwe unu nꞌokpuru Onyenwe anyị. Nꞌihi na nwoke bụ isi nwụnye ya, dị ka Kraịst siri bụrụ isi nzukọ ya bụ chọọchị, na onye nzọpụta nke nzukọ ahụ bụ anụ ahụ ya. Ya mere, dị ka nzukọ Kraịst si edo onwe ya nꞌokpuru Kraịst, otu a ka ụmụ nwanyị nwere di kwesịrị ido onwe ha nꞌokpuru di ha. Unu bụ ndị nwoke na-alụ nwụnye, hụnụ nwụnye unu nꞌanya dị ka Kraịst siri hụ nzukọ ya bụ chọọchị nꞌanya nwụọ nꞌihi ya. Jisọs Kraịst sitere nꞌọnwụ ya mee ka nzukọ ya dịrị nsọ, site na nsacha nke baptizim na nke okwu Chineke. Ka nzukọ ahụ bụrụ nzukọ jupụtara nꞌebube, na ịma mma, na ịdị ọcha na-enweghị ntụpọ ọ na-enweghibụla. Otu a ka ndị nwoke kwesịrị isi hụ nwụnye ha nꞌanya dị ka ha bụ anụ ahụ ha. Nꞌihi na onye ọ bụla hụrụ nwụnye ya nꞌanya na-ahụ anụ ahụ ya nꞌanya. Mmadụ ọ bụla adịghị nke kpọrọ anụ ahụ ya asị. Kama ọ na-azụ ya na-edozikwa ya. Nke a bụkwa ihe Kraịst meere anụ ahụ ya bụ chọọchị. Nꞌihi na anyị nile bụ akụkụ anụ ahụ ya. Dị ka akwụkwọ nsọ kwuru, “Nꞌihi nke a ka nwoke ga-eji hapụ ụlọ nne na nna ya ka e jikọtaa ya na nwụnye ya. Ha abụọ ga-abụkwa otu.” Amaara m na okwu a siri ike ịghọta, ma ọ bụ ihe e ji ama atụ banyere njikọta e jikọtara Kraịst na nzukọ ya. Ya mere, ọ dị mkpa na nwoke ga-ahụ nwụnye ya nꞌanya dị ka onwe ya. Nwanyị ọ bụla kwesịkwara ịsọpụrụ di ya.
 Jisọs na ndị na-eso ụzọ ya gakwara nꞌihu nꞌije ha ịga Jerusalem. Emesịa, ha rutere obodo nta ebe nwanyị a na-akpọ Mata bi. Nwanyị a nabatakwara ha nꞌụlọ ya. Mgbe Jisọs batara nꞌụlọ ahụ nọdụ ala, Meri nwanne Mata, bịara nọdụ nꞌala na-ege ntị nꞌihe Jisọs na-ekwu. Mgbe ihe ndị a na-eme, Mata nọrị na-agbalị ikwado nri Jisọs na ndị na-eso ụzọ ya ga-eri. Ọ dịghị anya ọrụ a bidoro ịgbakasị ya ahụ nꞌihi na ọ bụ ọrụ dị ukwuu. Mgbe Mata na-enweghị ike idi ịrụ ọrụ a nanị ya, ọ pụtara jụọ Jisọs sị, “Onyenwe m, ọ̀ dị mma na Meri ga-ahapụrụ nanị m ọrụ ndị a nile? Gwanụ ya ka ọ bịa nyere m aka.” Ma Jisọs zara ya sị, “Mata, Mata, ị na-atụfu nnọọ oge ịdọgbu onwe gị nꞌọrụ dị iche iche. Ma ọ bụ nanị otu ihe dị mkpa nꞌụwa, Meri nwanne gị achọtala ihe ahụ. Agaghị m anapụkwa ya ihe ahụ ọ chọtara!”
ỌLU OZI 18:26
Ma ọ nọgidesịrị ike na-ekwuwa okwu nꞌụlọ nzukọ ndị Juu. Mgbe Prisila na Akwila nụrụ okwu ya, ha jekwuru ya duru ya gaa nꞌụlọ, were nwayọọ kọwaara ya ihe nile banyere Ụzọ Chineke.
1 KỌRINT 14:33-35
 Nꞌihi na Chineke abụghị onye na-achọ ka ihe nile na-aga aghara aghara. Chineke chọrọ ka ihe nile na-aga nꞌusoro nꞌime chọọchị nile nke ndị ya. Ụmụ nwanyị ekwesịghị ikwu okwu nꞌime chọọchị. Ha ekwesịghị itinye ọnụ na ntụgha ụka ọ bụla, nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru na ha ga-edo onwe ha nꞌokpuru ụmụ nwoke. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ha chọrọ ịmata, ha jụọ di ha mgbe ha lara nꞌụlọ. Nꞌihi na ọ bụ ihe ihere na nwanyị ga-ekwu okwu nꞌime ọgbakọ chọọchị.
 Unu bụ ndị nwanyị a na-alụ alụ, doonụ onwe unu nꞌokpuru di unu dị ka unu si doo onwe unu nꞌokpuru Onyenwe anyị. Nꞌihi na nwoke bụ isi nwụnye ya, dị ka Kraịst siri bụrụ isi nzukọ ya bụ chọọchị, na onye nzọpụta nke nzukọ ahụ bụ anụ ahụ ya. Ya mere, dị ka nzukọ Kraịst si edo onwe ya nꞌokpuru Kraịst, otu a ka ụmụ nwanyị nwere di kwesịrị ido onwe ha nꞌokpuru di ha.
 Ọ bụ ha kwesịrị ịzụpụta ụmụ agbọghọ ka ha nwee uche zuru oke, bụrụ ndị na-ahụ di ha na ụmụ ha nꞌanya. Ka ha bụrụkwa ndị akọnuche ha zuru oke, ndị dị ọcha nꞌobi, ndị bụ ezi nwụnye na-edozi ezinụlọ di ha, ndị na-edo onwe ha nꞌokpuru di ha, ime ka onye ọ bụla ghara ikwulu ozi ọma Chineke.
1 TIMỌTI 5:14
Nꞌihi nke a echere m na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesi ka ụmụ agbọghọ ndị a di ha nwụrụ lụrụ di ọzọ, mụọkwa ụmụ, ma na-elekọtazikwa ezinụlọ ha anya nke ọma. Ọ bụrụ na ha mee nke a, ọ dịghị onye ọ bụla ga-ekwu okwu ọjọọ megide ha.
 Ọ dị ọtụtụ ụmụ nwanyị si Galili soro Jisọs na-enyere ya aka. Ha nọ ebe dị anya na-ele ya anya nꞌelu obe. Nꞌime ha bụ Meri Magdalini, na Meri nne Jemes na Josef, na nne Jemes na Jọn bụ ụmụ Zebedi.
Ana m ekelekwa Andronaikọs na Juniya, ndị ikwu m, ndị e tinyekọtara mụ na ha nꞌụlọ mkpọrọ. Ndị ozi nile na-asọpụrụ ha. Ha bukwa m ụzọ kwere na Kraịst.
Ma nwoke ekwesịghị ikpuchi isi ya mgbe ọ na-ekpe ekpere nꞌihi na Chineke kere nwoke nꞌoyiyi ya izipụta otuto ya. Ma nwanyị kwesịrị ikpuchi isi ya nꞌihi na nwanyị na-ezipụta otuto nwoke.
1 TIMỌTI 2:13-14
 Nke a ọ̀ bụ nꞌihi gịnị? Ọ bụ nꞌihi na Chineke buru ụzọ kee Adam tupu o kee Iiv. Ọ bụkwaghị Adam ka ekwensu ghọgburu, kama ọ bụ Iiv ka ọ ghọgburu mee ka o mebie iwu Chineke.
Unu bụ di na-alụ nwụnye lezienụ nwụnye unu anya nke ọma. Cheenụ echiche banyere ihe na-akpa ha mkpa nꞌihi adịghị ike ha. Nye ha ugwu ruuru ha nꞌihi na ọ bụ unu na nwụnye unu ga-abụ otu ịnata ndụ ahụ Chineke ga-enye. Ọ bụrụ na unu emesoghị ha mmeso dị ka o si kwesị Chineke agaghị aza ekpere unu.
 Unu bụ ụmụ nwanyị nwere dị, doonụ onwe unu nꞌokpuru di unu nꞌihi na nke a bụ ihe unu kwesịrị ime dị ka ndị Kraịst. Ma unu ndị bụ di, unu enwela obi ilu nꞌebe nwụnye unu nọ, kama na-ahụnụ ha nꞌanya.
1 PITA 3:1-7
 Unu ndị inyom nwere di na-eruberenụ di unu isi nꞌihi na ọ bụ site na mmeso unu na-emeso ha ka ndị na-ekweghị nꞌokwu Chineke nwere ike ikwere. Ndụ ọma unu na-ebi pụrụ ime ka ha chegharịa karịa okwu ọnụ ọ bụla unu ga-agwa ha. Unu abụla ndị na-achọ ịkwa mma nke anụ ahụ nanị, ndị na-atụfu oge ijikwa ma ọ bụ iyi iyeri ma ọ bụ ihe ntị dị iche iche ma ọ bụkwanụ ndị na-achọ ka ha yie uwe ọhụrụ ma ọ bụ maa akwa ọhụrụ pụtara mgbe ọ bụla. Kama meenụ ka mma unu bụrụ mma si nꞌime ime unu pụta, mma ahụ na-adịghị eme agadi, mma nke mmụọ ịdị nwayọọ, ma mmụọ ịdị nsọ, mma dị oke ọnụ ahịa nꞌihu Chineke. Nke a bụ ụdị ịma mma a hụrụ na ndụ ndị inyom ihe ha dị Chineke mma na mgbe ochie. Ndị inyom tụkwasịrị Chineke obi, na ndị echiche ha na nzube di ha dakọtara. Nke a bụ ihe Sera nꞌonwe ya mere. O doro onwe ya nꞌokpuru di ya bụ Eberaham, sọpụrụ ya dị ka nna nwe ụlọ. Ugbu a ọ bụrụ na unu emee otu a, unu na-agbaso nzọ ụkwụ Sera dị ka ụmụ na-eme ezi ihe. Mgbe ahụ ịtụ egwu agaghị adịrị unu na unu ga-emejọ di unu. Unu bụ di na-alụ nwụnye lezienụ nwụnye unu anya nke ọma. Cheenụ echiche banyere ihe na-akpa ha mkpa nꞌihi adịghị ike ha. Nye ha ugwu ruuru ha nꞌihi na ọ bụ unu na nwụnye unu ga-abụ otu ịnata ndụ ahụ Chineke ga-enye. Ọ bụrụ na unu emesoghị ha mmeso dị ka o si kwesị Chineke agaghị aza ekpere unu.
Keleerenụ m ụmụnna anyị ndị bi na Laodisia na nwanna anyị nwoke Nimfas na chọọchị na-ezukọ nꞌụlọ ya.
 Arịrịọ m na-arịọ Yodia na Sintiki bụ, ha biko, ha kwụsị ise okwu. Ana m arịọkwa gị, ezi onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ, sị gị biko, nyere ụmụ nwanyị a aka idozi okwu ha, nꞌihi na ha abụọ bụ ndị so m rụọ ọrụ ikwusa ozi ọma nye ndị ọzọ. Ha sokwa Klement rụọkwa ọrụ, sorokwa ndị ọzọ mụ na ha rụkọrọ ọrụ rụọ ọrụ, bụ ndị ahụ e dere aha ha nꞌakwụkwọ nke ndụ ahụ.